Candy 1532 - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Uncategorized / Candy 1532
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julaay 16, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Sideed u cabirtaa guusha maanta ka jirta dunida? Hagaag, waa dhacdo fudud oo qofku guuleysto haddii uu dhammaystiro hawlo adag oo aan walwal lahayn. Waxaad la kulmi doontaa xaalado badan oo leh dhibaatooyin. Ma iska dhiibaysaa uun? Hadaad sameyso, markaa ma dhadhamin kartaa macaanka guusha. Halkani waa meesha ciyaarta nacnacdu ku burburinayso. Waxay kuu keeneysaa hawlo adag waxayna kaa codsaneysaa inaad ku dhameystirto waqti cayiman.
Dhammaan howlaha si xor ah uma dhammaysan kartid. Waxaad u baahan tahay xoogaa hagitaan ah haddii aad si xun ugu dheggan tahay. Waxaan maqalnay dadku inta badan waxay ku dhagaan Candy 1532 heer. Sidaas, waxay u baahan tahay dhaqaaq istiraatiiji ah si looga gudbo, maadaama ay tahay mid adag. Waxaan kaa caawin doonaa arintaan inaan ku siino talooyin iyo tabaha la xiriira Candy 1532 heer.
Heer kasta oo nacnac burburin ah wuxuu leeyahay ujeedo go'an. Hadaad rabto inaad heerkaas garaacdo, waa inaad dhameystirtaa yoolkaas. In Candy 1532 hadafku waa ururinta 1 duurjoogta iyo 1 cherry. Isla markaana, waa inaad soo ururisaa 75000 Dhibco. Sidoo kale, 20 dhaqaaq ama ka yar waa in la qaadaa si tan loo gaaro. Guud ahaan waxaa jira 5 nacnac iyo 59 meelaha banaan. Waa inaad qorshooyinkaaga u qorsheeysaa si waafaqsan.
Candy 1532 talooyin iyo tabaha
Su'aashu waxay had iyo jeer tahay sida loo wajaho heer nacnac burburin? Haddii habkaagu uusan sax ahayn bilowga, waxaad ku dhegi doontaa mar uun. Ku bilaw, waa inaad qorsheeysaa dhaqaaqaada bilowga ah oo aad u dhaqaaqdaa si waafaqsan si aad heerkan u dhammaystirto.
marka hore, waa inaad u keentaa nacnaca midabka isku midka ah geeska midig ee hoose. Ku billow diyaarinta nacnac burbursan si aad uga takhalusto nacnacyada midabbada isku eg.
Ha u oggolaan in maaddooyinka ay ka guuraan rarka maadaama ay ku soo laaban doonaan ciyaarta. Sidaas awgeed, dhaq-dhaqaaqyadaada ayaa lumi lahaa
Mar kasta oo aad isku daydo inaad burburinayso nacnaca, waxay u gudbi doontaa dhanka midigta. Soo jeedintayadu waxay noqoneysaa in la sameeyo nacnac gaar ah halkii aan ka riixi lahayn walxaha oo dhan. Heerkani wuxuu kaa doonayaa inaad abuurto wax ka bixida maaddada. Waxaa intaa dheer, Maadadan bixitaanka iyo telefishanka oo ka fogeeya ciyaarta ayaa ku yaal dhinaca midig ee hoose.
Suun kasta oo wax sido wuxuu ku yaal midigta. Si kastaba ha noqotee, walax kasta haddii la soo celiyo waxay ka soo geli doontaa safka bidix ee hoose. Sidoo kale, haddii la celiyo dhaqdhaqaaqyadaada ayaa khasaari lahaa.
Hadaad dirto walxahan, waad heli doontaa 20,000 Dhibco. Tani waxay la mid tahay hal qeyb oo bartilmaameedka ah.
Tani waa sida ay tahay inaad ugu dhawaato kulankaan. Waxay u baahan tahay qorshe habboon. Haddii aanad sifiican u bilaabin bilowgii waxaad ku dambayn doontaa inaad lumiso dhagarta. Intaas waxaa sii dheer, isku day inaad hubiso in dhaqaajintaadu aysan lumin. Dhaqdhaqaaq kasta waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa maadaama ay qaali tahay. Haddii aad u dhaqaaqdo sida uu qorshuhu yahay aakhirka waxaad ku guuleysan doontaa inaad ku guuleysato heerkan. Kaliya xusuusnow yoolka dhamaadka oo hubi inaad u socoto sida ugu habboon.